Qeylo-dhaan laga keenay Heshiis Qarsoodi ah oo ay kala saxiixdeen DFS iyo Denmark – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Xisbiga Mucaaradka ee Dalka Denmark ee Social Democrats ayaa sheegay inay u baahan yihiin in Caddaymo laga siiyo Heshiis lala galay DFS, si Qaxootiga Soomaalida ku nool dalkaasi loogu soo masaafurin karo Somalia.
Afhayeenka Xisbiga Social Democrats ee dalkaasi, Mattias Tesfaye oo la hadlay Telefishinka TV 2 ayaa tilmaamay inay u baahan yihiin caddaynta ku aadan Heshiiskaasi, iyadoo aan la soconin Heshiiskaasi, isla markaana ay jiraan dad Soomaali ah oo si qarsoodi ah loogu celiyey dalka Somalia.
Waxa uu tilmaamay inay qorsheynayaan inay la xiriiraan Wasiirada Arrimaha Socdaalka ee dalka Denmark Inger Støjberg, si wax looga weydiiyo Heshiiska Qarsoodiga iyo wax haatan socda.
Wasiiradda oo Farriin E-mail ku dirtay jawaabta ayey sheegtay in Heshiiska lala galay DFS uu yahay Heshiis Qarsoodi ah, waxayna diiday inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo Heshiiska qarsoodiga ee dadka Soomaalida loogu celinayo Somalia.
Xildhibaan oo ka tirsan Isbahaysiga (ENHEDSLISTEN) ayaa ku baaqay in si hufan loo eego Heshiiska Qarsoodiga ee lala galay DFS.
Xildhibaanka oo lagu magacaabo Nikolaj Villumsen waxa u uHeshiiskaasi ku tilmaamay fal dembi ah, waa sida uu hadalka u dhigay.
Warbaahinta dalka Denmark ayaa sheegtay inay heleen Dukumenti muujinaya Hrshiiska ay labada Dowladood gaareen, taasi oo lagu xusay in Soomaalida aan haysanin Sharciga Deganaanshaha Denmark in loo masaafuriyo Somalia.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la isweydiiyo Heshiiska Denmark la gashay DFS, isagoo isweydiiyey DFS ma tahay Dowlad shaqeysa mise waa Shabakad Dembiile ,waa sida uu hadalka u yiri.
Haweeney Soomaali oo lagu magacaabo Saynab Iman Shikhow, oo deggan Deegaanka Vollsmose oo u dhow magaalladda Odense ee dalka Denmark ayaa u sheegtay Telefishinka TV2 in ay Saraakiil ka tirsan Waaxda Socdaalka ee dalkaasi dhowr jeer isku dayeen inay iyada loo tarxiilo Somalia.
Saynab Iimaan Shiikhow ayaa sheegtay in Isku-daygaasi uu xiriir la leeyahay Wiilkeeda oo dalka Denmark laga masaafuriyey.
Si katsaba ha ahaatee, Wargeyska Politiken waxa uu sannadkii hore qoray inay Dowladaha Denmark iyo DFS ku heshiiyeeen in 12 qof oo ka mid ah Soomaalida aan sharciga ku lahayn Denmark sannad kasta lagu soo celiyo dalka Somalia, waa sida uu hadalka u dhigay.